December 2021 – ZEUS Myanmar
MCU Phase4မှ လက်ရှိထွက်ရှိပြီးသော ရုပ်ရှင်များ၏ Timeline များ
No Comments on MCU Phase4မှ လက်ရှိထွက်ရှိပြီးသော ရုပ်ရှင်များ၏ Timeline များ
2008 ခုနှဈ Iron Man နဲ့ စတငျလာခဲ့တဲ့ MCU ကွီးဟာ ဆိုရငျ phase သုံးခုကို ကြောျဖွတျကာ saga ကွီးတဈခုကိုလညျး အောငျမွငျစှာ အဆုံးသတျနိုငျခဲ့ပွီးပါပွီ ။ ယခုခြိနျမှာတော့ ဇာတျကောငျအသဈ hero အသဈတှနေဲ့ saga အသဈတဈခုကို အစပွုရနျ စတုတ်ထမွောကျ phase ကို ခပြွနပွေီဖွဈပွီး ယနေ့အထိဆိုရငျ movie3ကားနှငျ့ tv show3ခုလညျး ထုတျလှှငျ့ ပွသခဲ့ပွီးဖွဈတဲ့အပွငျ လကျရှိမှာလဲ hawkeye show ကို disney + ကနေ အပတျတိုငျး ပွသနလေကြျရှိပါတယျ။
သိပျမကွာမီက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ Disney + day မှာ ကွညောသှားတာတှအေရ marvel studios ကနေ နောကျထပျ shows အသဈတှေ ရုပျရှငျအသဈတှလေညျး အမြားကွီးလာဖို့ ရှိနပေါသေးတယျ ။ marvel fan တှအေတှကျတော့ အားရစရာပါပဲ။
ဒီလို တဈစထကျတဈစ ကယြျပွနျ့လာနတေဲ့ marvel cinematic universe ကွီးမှာ fan တှေ မကွာခဏ အမှတျမှားလေ့ရှိပွီး နားလညျရခကျနတေဲ့ အရာတဈခုရှိနပေါတယျ ။ အဲ့ဒါကတော့ timeline ပွူနာပါပဲ ။ ဒါကတော့ အရမျးကွီးလညျး အဆနျးမဟုတျပါဘူး ။ Hollywood ရဲ့ တဈကားတညျးသီးသနျ့မဟုတျတဲ့ cinematic universe တှတေိုငျးမှာ ဒီ timeline ပွူနာက ရှိတတျစမွဲပါ ။ Hollywood ရဲ့နာမညျကွီး franchise တှဖွေဈတဲ့ Star Wars တို့ The Conjuring universe တို့ DCEU တို့မှာတောငျ timeline ရှုပျထှေးမှုတှကေ ရှိပါတယျ။
Iron Man ကနေ Endgame အထိ Infinity Saga တဈလြှောကျ timeline ကိုတော့ အားလုံးနီးပါးသိပွီးလောကျမယျထငျလို့ တဈကူးတဈကတော့ မရှငျးပွနတေော့ပါဘူး။ လကျရှိ phase4က ထှကျရှိပွီးခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျတှရေဲ့ timeline ကိုပဲ ပွောပွပေးသှားပါမယျ။
Phase4အတှငျး ပထမဆုံး ထှကျရှိခဲ့တဲ့ movie တဈခုဖွဈပွီး Original Six Avengers ထဲက Black Widow (Natasha Romanoff) ရဲ့ ဘဝနောကျကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ ။ phase4ရဲ့ ရုပျရှငျ တောျတောျမြားမြားက Endgame အပွီးကို ဇာတျအိမျတညျထားတယျဆိုတာ fan တှလေညျး သိကွမှာပါ ။ ဒါပမေယျ့ black widow ကတော့ ဒီ new saga timeline နဲ့ အရမျးကွီး မသကျဆိုငျပါဘူး ။ Endgame အတှငျး ကွှလှေငျ့ခဲ့ရတဲ့ black widow ဇာတျကောငျရဲ့ fan တှတေောငျးဆိုမှုကွောငျ့သာ solo movie တဈခုထုတျပေးခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီရုပျရှငျအတှငျး new saga အတှကျ အရေးကွီးလာမယျ့ ဇာတျကောငျအသဈတဈယောကျကိုလညျး မိတျဆကျသှားခဲ့ပါတယျ ။ သူကတော့ new black widow (yelena belova) ပါ ။ Black widow ရဲ့ timeline ကတော့ Civil war အပွီးဖွဈပါတယျ civil war အတှငျး စာခြူပျကိုဖောကျဖကြျကာ tony တို့နဲ့ အစိုးရကို သစ်စာဖောကျပွီး cap တို့ကိုကူညီခဲ့တာကွောငျ့ ထှကျပွေးနရေတာကိုလညျး ဇာတျလမျးအစမှာတငျ မွငျတှေ့ခဲ့ရမှာပါ။
Loki and What If?
Loki ကတော့ Endgame အတှငျး ဖွဈပကြျသှားခဲ့တာပါ။ Avengers တှရေဲ့ အခြိနျခရီးသှားမှုမှာ Loki tessaract ကို ယူပွေးဖို့ အခှငျ့အရေးရသှားပွီး ထှကျပွေးရာကနေ tva နဲ့ သှားငွိပွီး Loki series ဖွဈပေါျလာခဲ့ပါတယျ။ What if..? ကတော့ Loki series အပွီး timeline ခှဲဖွာမှုတှကွေောငျ့
ဖွဈတညျလာတဲ့ တခွားသော alternate timeline တှကေို ပွသှားတာပါ။ ဒီထဲမှာတငျ mcu ရဲ့ multiverse ကိုလညျး မိတျဆကျသှားခဲ့ပါတယျ။
MCU ရဲ့ သှားနကြေ လမျးကွောငျးကနေ စတငျခှဲထှကျခဲ့ပွီး sitcom series တဈခုအနနေဲ့ fan တှကေို မိတျဆကျပေးခဲ့တဲ့ Wandavision ကတော့ phase4ရဲ့ ပထမဆုံး show အဖွဈ ထှကျရှိလာခဲ့ပါတယျ ။ timeline အားဖွငျ့တော့ wandavision ဟာ Endgame အပွီး သုံးပတျအကွာ ဖွဈတာကွောငျ့ November 2023 လောကျ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဒီလိုပွောနိုငျသလဲဆို Infinity War စဖွဈခဲ့တာက 2018 မှာ ဖွဈပွီး Endgame ဟာ IW အပွီး ငါးနှဈအကွာကို ဇာတျအိမျတညျထားတာကွောငျ့ 2023 မှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့အပွငျ insider တှေ confirm ထားတာအရ Endgame ဟာ October 2023 မှာ ဖွဈခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါကို ပိုသခြောသှားစတောကတော့ Far from home ကွောငျ့ပါပဲ။ ဒါကို အောကျမှာ ဆကျပွောပွပေးပါမယျ။
The Falcon and the Winter Soldier and Shang Chi
Wandavision အပွီးမှာတော့ TFATWS လာပါတယျ။ TFATWS ဟာ Endgame အပွီး5လအကွာဖွဈတဲ့အတှကျ March 2024 မှာ ဖွဈပှားသှားခဲ့တာပါ။
သူ့နောကျမှာတော့ Shang Chi and the Legend of Ten Rings ဟာ တဈလအကှာနဲ့ ရှိနပွေီး Shang Chi ကတော့ April 2024 မှာ ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ ။ အစကတော့ Shang chi ဟာ IW နဲ့ Endgame ကွား blip ကာလအတှငျး ဖွဈမယျလို့ ထငျခဲ့ကွပမေယျ့ တကယျတမျး ရုပျရှငျထှကျလာတဲ့အခါမှာတော့ Endgame အပွီးဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့အပွငျကိုမှ Disney + ကနေ MCU ကွီးတဈလြှောကျ official timeline ကို ထုတျပွခဲ့ရာမှာတော့ Shang chi ဟာ TFATWS နောကျမှ ဖွဈမှနျးသိခဲ့ရပါတယျ ။ Shang Chi ရဲ့ timeline ဟာ Endgame အပွီး6လအကွာဖွဈတာကွောငျ့ April 2024 ပါ။
Far From Home and Eternals
Endgame အပွီးကို ဇာတျအိမျတညျထားပမေယျ့လညျး phase4ထဲ ပါမလာဘဲ phase3infinity saga ရဲ့ အပိတျဖွဈခဲ့ရတဲ့ Far From Home ကတော့ Endgame ဖွဈရပျတှအေပွီး 8 လအကွာ summer ကာလမှာ ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ ။ သူတို့ western က summer ဆိုတာက June ကနေ စတာဖွဈပွီး September မှာ အဆုံးသတျတာပါ ။ Endgame ကနေ စတှကျမယျဆိုလညျး 8 လအကွာက June လပါပဲ ။ ဒီတော့ Far From Home က June 2024 မှာ ဖွဈနတောပါ ။
Far From Home နဲ့ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ Eternals event ကလညျး တဈဖကျမှာ ဖွဈပကြျနတောဖွဈပါတယျ ။
ဒါကိုတော့ Eternals Interview တဈခုမှာ confirm ထားခဲ့တာပါ ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ Eternals ကလညျး Far From Home နဲ့ တဈခြိနျတညျး တဈပွိုငျတညျးပါပဲ ။
No Way Home and Hawkeye
လကျရှိမှာ Fan တှေ အမြှောျလငျ့ရဆုံးဖွဈနတေဲ့ No Way Home ကတော့ Far From Home အပွီး Spider-man identity ဖောျခံရတဲ့အခြိနျကနေ အစပွုသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ No way home ဟာ Summer 2024 ကနေ Winter 2024 အထိ ရောကျသှားမှာဖွဈပွီး christmas ကာလအတှငျး No way home ဖွဈပှားသှားမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မေးခှနျးတဈခုရှိနတောကတော့ No Way Home အပွီးမှ Hawkeye က လာတာပါပဲ ။ No Way Home ရော Hawkeye ရောရဲ့ ရိုကျကှငျးက new york မှာဖွဈသလို အခြိနျကလညျး christmas ပါပဲ ။
Hawkeye ရဲ့ timeline ကို marvel ဖကျက အတိအကြ မ confirm သေးပမေယျ့ Endgame အပွီး နှဈနှဈအကွာ 2025 လို့တော့တရားဝငျပွောထားပါတယျ။
ဒါဆို No way home အပွီး တဈနှဈအကွာမှပါပဲ ။ No Way home လို Endgame နီးနီးပွငျးထနျတဲ့ Multiversal threat ကွီး တဈခုဟာ ဘာတဈခုမှ မဖွဈခဲ့သလို လထေဲပြောကျကှယျသှားမှာတော့ မဟုတျလောကျပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ Hawkeye ထဲမှာလညျး clint အပါအဝငျ လူတှအေားလုံးက Endgame ကိုသာ event အကွီးကွီးလို သတျမှတျထားကွပွီး ပှဲတှဘောတှနေဲ့ ပြောျပြောျရှှငျရှှငျပါပဲ။ ဘယျသူ့မှ No Way Home အကွောငျး မပွောကွသလို သတငျးတှထေဲလညျး မပါလာခဲ့ပါဘူး။ ဆိုတော့ Hawkeye ရဲ့ 2025 timeline ဆိုတာဟာ 2024 ရဲ့ Christmas ဖွဈပွီး 2025 ကိုကူးတဲ့ Timeline မြိုးလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဘာတှဖွေဈနသေလဲ ဘာတှဖွေဈသှားသလဲ ဆိုတာကတော့ No Way Home ထှကျမှပဲ သခြောသိရမှာပါ။
ဆိုတော့ Endgame အပွီး Timeline တှကေိုစီလိုကျရငျ အခုလိုထှကျလာပါတယျ။ Hawkeye ကတော့မသခြောသေးပမေယျ့ ကြှနျတောျကတော့ Hawkeye ရဲ့ timeline ကို 2024 christmas နဲ့ No Way home နဲ့ တဈပွိုငျတညျး သို့မဟုတျ No way home ထကျအရငျလို့ထငျတဲ့အတှကျ သူတို့ ၂ ယောကျကို အတူတူဖွဈလောကျတယျလို့ list ထဲထညျ့ထားပါတယျ။ သတေော့မသခြောပါဘူး။ No way home ထှကျလာမှသာ အဖွသေိရမှာဖွဈပါတယျ။
ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ MCU ကတော့ Fan တှအေကွိုကျလိုကျပွီး project တှအေမြားကွီး ခပြွနပွေီဖွဈပါတယျ ။ အခုခြိနျမှာ
မရှငျးသေးတဲ့ မေးခှနျးတှဟောလညျး နောကျ movie တှေ ထှကျလာတဲ့အခါ ရှငျးသှားမယျလို့ ထငျပါတယျ။
Fan တှကေို မေးခှနျးတှေ fan theory တှနေဲ့ အကပြျရိုကျစမေယျ့ Multiverse of Madness အစပွုရာ No Way Home ကတော့ December 17 မှာ စတငျပွသသှားတော့မှာဖွဈပွီး Digital release ကတော့ သုံးလအကွာလောကျမှ ထှကျရှိလာမှာလညျးဖွဈပါတယျ။
(Zeusmyanmar မှ Content မြားကို ပွနျလညျကူးယူဖောျပွခှငျ့မပွုပါခငျဗြာ။)
2008 ခုနှစ် Iron Man နဲ့ စတင်လာခဲ့တဲ့ MCU ကြီးဟာ ဆိုရင် phase သုံးခုကို ကျော်ဖြတ်ကာ saga ကြီးတစ်ခုကိုလည်း အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ယခုချိန်မှာတော့ ဇာတ်ကောင်အသစ် hero အသစ်တွေနဲ့ saga အသစ်တစ်ခုကို အစပြုရန် စတုတ္ထမြောက် phase ကို ချပြနေပြီဖြစ်ပြီး ယနေ့အထိဆိုရင် movie3ကားနှင့် tv show3ခုလည်း ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင် လက်ရှိမှာလဲ hawkeye show ကို disney + ကနေ အပတ်တိုင်း ပြသနေလျက်ရှိပါတယ်။
သိပ်မကြာမီက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Disney + day မှာ ကြေညာသွားတာတွေအရ marvel studios ကနေ နောက်ထပ် shows အသစ်တွေ ရုပ်ရှင်အသစ်တွေလည်း အများကြီးလာဖို့ ရှိနေပါသေးတယ် ။ marvel fan တွေအတွက်တော့ အားရစရာပါပဲ။
ဒီလို တစ်စထက်တစ်စ ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ marvel cinematic universe ကြီးမှာ fan တွေ မကြာခဏ အမှတ်မှားလေ့ရှိပြီး နားလည်ရခက်နေတဲ့ အရာတစ်ခုရှိနေပါတယ် ။ အဲ့ဒါကတော့ timeline ပြဿနာပါပဲ ။ ဒါကတော့ အရမ်းကြီးလည်း အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး ။ Hollywood ရဲ့ တစ်ကားတည်းသီးသန့်မဟုတ်တဲ့ cinematic universe တွေတိုင်းမှာ ဒီ timeline ပြဿနာက ရှိတတ်စမြဲပါ ။ Hollywood ရဲ့နာမည်ကြီး franchise တွေဖြစ်တဲ့ Star Wars တို့ The Conjuring universe တို့ DCEU တို့မှာတောင် timeline ရှုပ်ထွေးမှုတွေက ရှိပါတယ်။
Iron Man ကနေ Endgame အထိ Infinity Saga တစ်လျှောက် timeline ကိုတော့ အားလုံးနီးပါးသိပြီးလောက်မယ်ထင်လို့ တစ်ကူးတစ်ကတော့ မရှင်းပြနေတော့ပါဘူး။ လက်ရှိ phase4က ထွက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ timeline ကိုပဲ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
Phase4အတွင်း ပထမဆုံး ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ movie တစ်ခုဖြစ်ပြီး Original Six Avengers ထဲက Black Widow (Natasha Romanoff) ရဲ့ ဘဝနောက်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ phase4ရဲ့ ရုပ်ရှင် တော်တော်များများက Endgame အပြီးကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားတယ်ဆိုတာ fan တွေလည်း သိကြမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် black widow ကတော့ ဒီ new saga timeline နဲ့ အရမ်းကြီး မသက်ဆိုင်ပါဘူး ။ Endgame အတွင်း ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ black widow ဇာတ်ကောင်ရဲ့ fan တွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်သာ solo movie တစ်ခုထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီရုပ်ရှင်အတွင်း new saga အတွက် အရေးကြီးလာမယ့် ဇာတ်ကောင်အသစ်တစ်ယောက်ကိုလည်း မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ သူကတော့ new black widow (yelena belova) ပါ ။ Black widow ရဲ့ timeline ကတော့ Civil war အပြီးဖြစ်ပါတယ် civil war အတွင်း စာချူပ်ကိုဖောက်ဖျက်ကာ tony တို့နဲ့ အစိုးရကို သစ္စာဖောက်ပြီး cap တို့ကိုကူညီခဲ့တာကြောင့် ထွက်ပြေးနေရတာကိုလည်း ဇာတ်လမ်းအစမှာတင် မြင်တွေ့ခဲ့ရမှာပါ။
Loki ကတော့ Endgame အတွင်း ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာပါ။ Avengers တွေရဲ့ အချိန်ခရီးသွားမှုမှာ Loki tessaract ကို ယူပြေးဖို့ အခွင့်အရေးရသွားပြီး ထွက်ပြေးရာကနေ tva နဲ့ သွားငြိပြီး Loki series ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ What if..? ကတော့ Loki series အပြီး timeline ခွဲဖြာမှုတွေကြောင့်
ဖြစ်တည်လာတဲ့ တခြားသော alternate timeline တွေကို ပြသွားတာပါ။ ဒီထဲမှာတင် mcu ရဲ့ multiverse ကိုလည်း မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။
MCU ရဲ့ သွားနေကျ လမ်းကြောင်းကနေ စတင်ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး sitcom series တစ်ခုအနေနဲ့ fan တွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Wandavision ကတော့ phase4ရဲ့ ပထမဆုံး show အဖြစ် ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ။ timeline အားဖြင့်တော့ wandavision ဟာ Endgame အပြီး သုံးပတ်အကြာ ဖြစ်တာကြောင့် November 2023 လောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောနိုင်သလဲဆို Infinity War စဖြစ်ခဲ့တာက 2018 မှာ ဖြစ်ပြီး Endgame ဟာ IW အပြီး ငါးနှစ်အကြာကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာကြောင့် 2023 မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အပြင် insider တွေ confirm ထားတာအရ Endgame ဟာ October 2023 မှာ ဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ပိုသေချာသွားစေတာကတော့ Far from home ကြောင့်ပါပဲ။ ဒါကို အောက်မှာ ဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။
Wandavision အပြီးမှာတော့ TFATWS လာပါတယ်။ TFATWS ဟာ Endgame အပြီး5လအကြာဖြစ်တဲ့အတွက် March 2024 မှာ ဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါ။
သူ့နောက်မှာတော့ Shang Chi and the Legend of Ten Rings ဟာ တစ်လအကွာနဲ့ ရှိနေပြီး Shang Chi ကတော့ April 2024 မှာ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ အစကတော့ Shang chi ဟာ IW နဲ့ Endgame ကြား blip ကာလအတွင်း ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တမ်း ရုပ်ရှင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Endgame အပြီးဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့အပြင်ကိုမှ Disney + ကနေ MCU ကြီးတစ်လျှောက် official timeline ကို ထုတ်ပြခဲ့ရာမှာတော့ Shang chi ဟာ TFATWS နောက်မှ ဖြစ်မှန်းသိခဲ့ရပါတယ် ။ Shang Chi ရဲ့ timeline ဟာ Endgame အပြီး6လအကြာဖြစ်တာကြောင့် April 2024 ပါ။
Endgame အပြီးကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားပေမယ့်လည်း phase4ထဲ ပါမလာဘဲ phase3infinity saga ရဲ့ အပိတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Far From Home ကတော့ Endgame ဖြစ်ရပ်တွေအပြီး 8 လအကြာ summer ကာလမှာ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ western က summer ဆိုတာက June ကနေ စတာဖြစ်ပြီး September မှာ အဆုံးသတ်တာပါ ။ Endgame ကနေ စတွက်မယ်ဆိုလည်း 8 လအကြာက June လပါပဲ ။ ဒီတော့ Far From Home က June 2024 မှာ ဖြစ်နေတာပါ ။
Far From Home နဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Eternals event ကလည်း တစ်ဖက်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကိုတော့ Eternals Interview တစ်ခုမှာ confirm ထားခဲ့တာပါ ။ ဒီအတွက်ကြောင့် Eternals ကလည်း Far From Home နဲ့ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းပါပဲ ။
လက်ရှိမှာ Fan တွေ အမျှော်လင့်ရဆုံးဖြစ်နေတဲ့ No Way Home ကတော့ Far From Home အပြီး Spider-man identity ဖော်ခံရတဲ့အချိန်ကနေ အစပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် No way home ဟာ Summer 2024 ကနေ Winter 2024 အထိ ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး christmas ကာလအတွင်း No way home ဖြစ်ပွားသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မေးခွန်းတစ်ခုရှိနေတာကတော့ No Way Home အပြီးမှ Hawkeye က လာတာပါပဲ ။ No Way Home ရော Hawkeye ရောရဲ့ ရိုက်ကွင်းက new york မှာဖြစ်သလို အချိန်ကလည်း christmas ပါပဲ ။
Hawkeye ရဲ့ timeline ကို marvel ဖက်က အတိအကျ မ confirm သေးပေမယ့် Endgame အပြီး နှစ်နှစ်အကြာ 2025 လို့တော့တရားဝင်ပြောထားပါတယ်။
ဒါဆို No way home အပြီး တစ်နှစ်အကြာမှပါပဲ ။ No Way home လို Endgame နီးနီးပြင်းထန်တဲ့ Multiversal threat ကြီး တစ်ခုဟာ ဘာတစ်ခုမှ မဖြစ်ခဲ့သလို လေထဲပျောက်ကွယ်သွားမှာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် Hawkeye ထဲမှာလည်း clint အပါအဝင် လူတွေအားလုံးက Endgame ကိုသာ event အကြီးကြီးလို သတ်မှတ်ထားကြပြီး ပွဲတွေဘာတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲ။ ဘယ်သူ့မှ No Way Home အကြောင်း မပြောကြသလို သတင်းတွေထဲလည်း မပါလာခဲ့ပါဘူး။ ဆိုတော့ Hawkeye ရဲ့ 2025 timeline ဆိုတာဟာ 2024 ရဲ့ Christmas ဖြစ်ပြီး 2025 ကိုကူးတဲ့ Timeline မျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ဘာတွေဖြစ်သွားသလဲ ဆိုတာကတော့ No Way Home ထွက်မှပဲ သေချာသိရမှာပါ။
ဆိုတော့ Endgame အပြီး Timeline တွေကိုစီလိုက်ရင် အခုလိုထွက်လာပါတယ်။ Hawkeye ကတော့မသေချာသေးပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ Hawkeye ရဲ့ timeline ကို 2024 christmas နဲ့ No Way home နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း သို့မဟုတ် No way home ထက်အရင်လို့ထင်တဲ့အတွက် သူတို့ ၂ ယောက်ကို အတူတူဖြစ်လောက်တယ်လို့ list ထဲထည့်ထားပါတယ်။ သေတော့မသေချာပါဘူး။ No way home ထွက်လာမှသာ အဖြေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် MCU ကတော့ Fan တွေအကြိုက်လိုက်ပြီး project တွေအများကြီး ချပြနေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ အခုချိန်မှာ
မရှင်းသေးတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာလည်း နောက် movie တွေ ထွက်လာတဲ့အခါ ရှင်းသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Fan တွေကို မေးခွန်းတွေ fan theory တွေနဲ့ အကျပ်ရိုက်စေမယ့် Multiverse of Madness အစပြုရာ No Way Home ကတော့ December 17 မှာ စတင်ပြသသွားတော့မှာဖြစ်ပြီး Digital release ကတော့ သုံးလအကြာလောက်မှ ထွက်ရှိလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
(Zeusmyanmar မှ Content များကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခွင့်မပြုပါခင်ဗျာ။)